Askarta Mareykan Iyo Kuwa Dowlada Oo Caruur Xasuuqay. – Bogga Calamada.com
Askarta Mareykan Iyo Kuwa Dowlada Oo Caruur Xasuuqay.
Askarta Mareykanka ee loo yaqaano Bankraft ee fadhigoodu yahay garoonka Balli-doogle ayaa habeenkii xalay dhacdo wuxuushnimo ah ka geystay machad diinta islaamka lagu barto oo ku yaalla gobolka Shabeelaha dhexe.
Ciidamadan oo ay wehliyeen kuwa Soomaali ah kuna socdaalayay dhulka iyaga oo wata Kaarayaal sidoo kalana dul heehaabayeen dayuuradaha Daroniska ayaa ku habsaday machadka oo ku yaalla degaanka Jiliyaale oo 50 KM galbeedka kaga beegan magaalada Jowhar, waxaana ay ku dileen 4 caruur ah iyo hal mucallim.
Sidoo kale waxay qafaasheen caruur kale kuwaas oo aan illaa iyo hadda la ogeyn nolol iyo geeri waxa ay ku sugan yihiin. Machadkan ayaa waxaa lahaa beesha Gaal-jecel gaar ahaan jufada Barsane halkaasoo caruurta lagu barayay Qur’aanka kariimka ah iyo culuumta kale ee sharciga ah.
Qaramada midoobay iyo hey’adaha xuquuqda aadanaha ayaa dhawaan soo saaray warbixinno ay ku dhiirra galinayeen in la beegsado macaahidda diinta islaamka lagu barto islamarkaana ay ku sheegayeen in wilaayaadka islaamiga ah ay kusoo badanayaan caruurta lagu ababiyo barashada diinta islaamka, walibana waxay dhacdadan kusoo aaday iyadoo maalin uun kahor ay qormada arrinta soo saartay.
Machadkan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee ay Mareykanku beegsadaan kuna dilaan caruur yaryar kuwa kalana ku qafaashaan.
Muddo dhowr bilood laga joogo ayay ahayd markii ciidamo reer galbeed ah ay weerareen machad lagu baranay culuumta sharciga ah laguna tarbiyeynayay gabdho laga keenay Yurubta kuwaasoo ay qafaasheen kuna celiyeen halkii markii hore laga keenay iyagoo ku marmarsiyoonaya in gandhaha lagu qasbayay barashada diinta islaamka ayna soo badbaadiyeen.